A Travel to Shan(North) 1 (သီပေါမြို့သို့ အလည်တစ်ခေါက်) - မြန်မာ့ခရီးသွားကွန်ယက်Experiences - Myanmar Travel Network
Myanmar Travel Network
Members Travel Exps
A Travel to Shan(North) 1 (သီပေါမြို့သို့ အလည်တစ်ခေါက်)
မြန်မာ့ခရီးသွားကွန်ယက် ရဲ့ ပထမဆုံးpostဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့လေးကို အလည်သွားခဲ့တဲဲ့experience လေးတွေ ဝေမျှပေးရင်း စတင်လိုက်ပါတယ်
သီပေါမြို့ဆိုတာ ရှမ်းစော်ဘွားတွေနေခဲ့တဲ့မြို့လေးဆိုတော့ သိပ်ပြီး အရမ်းကြီးလည်ပတ်စရာတော့ မရှိဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သီပေါဆိုတာ Twilight over Burma ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကျော် Novelတစ်ပုဒ်ရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာဆိုတော့ foreignerတွေ အတော်များများလာရောက်လေ့လာကြတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ဆိုလဲမှားမယ် မထင်။ တကယ့် သမိုင်းကြောင်းတွေ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ စုနေတဲ့ မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့လို့ တင်စားရမယ်ထင်တယ်
အစကပြင်ဦးလွင်မြို့ကို ခဏလောက်ဘဲ leave လေးရတုန်း လည်မယ်စဉ်းစားရင်း ဘယ်တွေသွားရင်ကောင်းမလဲတွေးရင်းကနေရောက်သွားခဲ့တာ
သီပေါမြို့ကို မြန်မာ့မီးရထား (သို့) လားရှိုးထိသွားတဲ့ လိုင်းကားအသေးလေးတွေနဲ့ သွားလို့ရပါတယ်။ Express တွေကတော့ အနည်းငယ်ရှားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အချိန်rushဖြစ်မှာစိုးတဲ့အတွက် ပြင်ဦးလွင်ကနေ လိုင်းကားအသေးနဲ့ဘဲ ချိတ်ပြီးတန်းတက်သွားပါတယ်။ အချိန်ရရင် တောတောင်ရှူခင်းတွေခံစားလို့ရတဲ့ မြန်မာ့မီးရထားနဲ့လဲ သွားကြည့်ဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ကမ္ဘာကျော် goteik viaduct တံတားကြီးကို ဖြတ်စီးရတာ အရမ်းရင်သပ်ရှှုမောစရာကောင်းပါတယ်။ လိုင်းကားခက နောက်ခန်းဆိုရင်၅၀၀၀ကျပ်ပါ ရှေ့ခန်းဆို၁၀၀၀၀ကျပ်ထင်ပါတယ် သိပ်တော့မကွာပါဘူး။ တောင်တက်တောင်ဆင်းလမ်းတွေကို ရှေ့ခန်းကစီးရတာ roller coaster စီးရသလိုပါဘဲ It's so excited 🤩🤩🤩ကားဆရာကတော့ လမ်းခရီးက view pointတွေမှာ နားပေးပါတယ် ဓာတ်ပုံတွေလဲရိုက်ပေးပါတယ်။ တောင်တက်တောင်ဆင်းတွေ အရမ်းများပြီး ရှူခင်းတွေအရမ်းလှပါတယ်။
သီပေါမြို့က ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီး အရင်ခေတ်တွေက ရှမ်းစော်ဘွားမြို့ဆိုတော့ သူ့နေရာနှင့်သူ စုံလင်သလောက်စုံလင်ပါတယ်။ မြစ်ငယ်မြစ်(ဒုတ္ထဝတီမြစ်)ဘေးမှာတည်ရှိပြီး tourist attrationမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တာနဲ့အညီ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ စျေးစသဖြင့်စံုလင်လှပါတယ်။
ရှမ်းပြည်ဆိုတာ တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေနှင့်ပြည့်နေတဲ့​ဒေသဆိုတော့ နွေရာသီတောင် သိပ်မပူပါဘူး။ ကိုယ်တွေသွားတုန်းက ဖေဖော်ဝါရီလဆိုပေမယ့် ရာသီဥတုက အရမ်းမပူဘဲ လည်လို့ပတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်။
သီပေါမြို့မှာ ရှိတဲ့လည်ပတ်စရာနေရာတွေကို စက်ဘီး(သို့)ဆိုင်ကယ်နှင့်သွားတာ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ လည်ပတ်စရာနေရာတွေက တစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာအနည်းငယ်လှမ်းလို့ပါ
၁.Shan palace (သီပေါ ဟော်နန်း)
အမြဲတမ်းဖွင့်လေးဖွင့်ထမရှိပါဘူ။း အချိန်နှင့်ဖွင့်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် စော်ဘွား၏ အမျိုးတစ်ယောက်မှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။(edited: ယခုအခါ စော်ဘွား၏အမျိုးများမှ သီပေါမြို့ဘုန်းတော်ကြီးထံအပြီးတိုင် စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းလိုက်သည်ဟုသိရ) မသွားခင် စုံစမ်းပြီးသွားစေချင်ပါတယ်။ စော်ဘွားဟော်နန်းတွေရဲ့ ကြီးကျယ်ခန်းနားမှုတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်
၂. Little Bagan
ပုဂံမြို့လို့တင်စားရလောက်တဲ့ ပုဂံ အသေးစားလေးပါ အရင်ခေတ်ကလူတွေတည်ခဲ့တဲ့ စေတီငယ်လေးတွေရှိပါတယ်
ဒုဌဝတီမြစ်ဆိုတာ နံမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ သီချင်းတွေထဲမှာပါဝင်နေကျဆိုတော့ အဲ့ကမ်းနားလေးမှာ လေညှင်းလေးခံရင်း လည်ပတ်သင့်ပါတယ်
၄. Sunset hill
သီပေါမြို့ အပြင်နားက အဲ့တောင်ကုန်းလေးကလဲ မသွားမဖြစ်သွားရောက်ပြီး sunset viewလေးတွေခံစားရင်း ဒုဌဝတီမြစ်ကြီးနှင့် သီပေါမြို့ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြန်လည်တွေးတောကြည့်သင့်တဲ့နေရာလေးပါ
သီပေါမြို့ရဲ့ sunstအချိန်က တော်တော်လှတဲ့အထဲမှာပါပါတယ် ဒုဌဝတီမြစ်ကြီးနှင့် သီပေါမြို့ကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရတာ တကယ့်ကို ဘဝရဲ့ ရှားပါးအခိုက်အတန့်တွေထဲကတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရသလိုပါဘဲ။
သီပေါမြို့က ဟိုတယ်​တွေကတော်တော်သန့်ပါတယ် နောက်ပြီး စျေးလဲသင့်ပါတယ် မနက်စာအပါကို ၂၅၀၀၀-၃၀၀၀၀ဝန်းကျင်သာ ရှိပါတယ်။ နံမည်ကြီးဟိုတယ်တွေကတော့ Charles hotel, La Residence, Lily Hotelစသဖြင့်ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ သီပေါစျေးနှင့်လဲနီးတဲ့ Lily Hotel မှာတည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အနီးအနားမှာလဲ ဆိုင်ကယ်အငှါးဆိုင်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ ရှိပါတယ်။
Foreigner တွေအလာများတဲ့မြို့ဆိုတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆိုင်လေးတွေများပါတယ်။
ရှမ်းပြည်ဆိုတော့ ရှမ်းအစားအစာလေးတွေတော့ Try ကြည့်သင့်တယ်ဟုတ်?
Try ကြည့်သင့်တဲ့ ဆိုင်လေးတွေက
River view food lounge(စျေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်/အစာအသောက်အသင့်အတင့်)(view အဓိက)
Mrs. Popcorn's Garden(စျေးသင့်/အစားအသောက်ကောင်း)(ရှမ်း+foreigner အကြိုက်အစားအစာ)
အဲ့ဆိုင်လေးတွေက ကိုယ်တို့ အတွဲ သေချာ Tryခဲ့ကြတဲ့ဆိုင်လေးတွေပါ
ကမ်းနားလမ်းဘက်မှာ Liquor တွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်လဲရှိပါတယ် Chill လိုသူတွေအတွက်ပါ
သီပေါမနက်ခင်းစျေးလေးလဲ ပတ်ကြည့်သင့်ပါတယ် မတူညီတဲ့ နေရာဒေသတွေရဲ့ အစာအသောက်လေးတွေရှိပါတယ်
နောက်ပြီး သီပေါမြို့က Trekkingသွားလို့ကောင်းတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ပါ အချိန်ရရင် Trekking လေးပါ Tryကြည့်သင့်ပါတယ်
သွားရောက်လည်ပတ်ရင် ကြည့်လို့ရအောင် မြေပုံလေးထည့်ပေးထားတယ်နော်
ကဲဒီလောက်ဆို စုံသင့်စလောက်လဲစုံပြီဆိုတော့ ဒီ blog post လေးကို ဒီမှာဘဲ နားတော့မယ်နော်။နောက်ထပ် ဘယ်နေရာတွေရဲ့ ခရီးစဉ်တွေအကြောင်းထပ်တင်ဦးမလဲဆိုတာ သိချင်ရင် Myanmar Travel Network facebook page လေးရယ် Youtube channel လေးရယ်ကို အမြဲတမ်းဝင်ကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
See ya all. 😘😘😘
Tags: shan north, hsi paw, myanmartravelnetwork
You need to beamember of Myanmar Travel Network to add comments!
Join Myanmar Travel Network
A Travel to Shan (North)2(နောင်ချို camping experiences)
Posted by မြန်မာ့ခရီးသွားကွန်ယက် on June 14, 2020 at 21:34
Posted by မြန်မာ့ခရီးသွားကွန်ယက် on June 13, 2020 at 18:08
© 2021 Myanmar Travel Network Powered by